Isilimela 2021 -iNombolo ye-1 yeBhokisi yeBhola yaseYurophu
Archives Monthly: Juni 2021
30 Isilimela 2021
I-Figueroa yeyona nto ibalaseleyo ye-bantamweight ngokoyisa uFulton Jr
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UBrandon Figueroa, Umzobo ngokuchasene neFulton Jr., UStephen Fulton Jr.	0
UBrandon Figueroa vs.Stephen Fulton Jr
NgoSeptemba 11th, 2021
UBrandon FigueroaIntshatsheli ye-super bantamweight ye-World Boxing Council, ubonakalise izakhono zakhe ngokuwoyisa u-Luis Nery owayengoyiki, ukuze akwazi ukuzinza.
Ubudala amashumi amabini anesine kunye nengxelo engenasiphako ye-22-0-1, uBrandon ujongene nomnye umceli mngeni onzima, nge-11 kaSeptemba, ejongene neqela lakhe kwihlabathi UStephen Fulton Jr..
Kudliwanondlebe ne-DAZN, uBrandon uphawule wathi:
“Ndiyazi ukuba baninzi abantu abandithandabuzayo. Yiyo loo nto uloyiso lwam nxamnye noNery lubaluleke kakhulu kwikhondo lam, njengoko ndoyisile intshatsheli ephindiweyo. Ukusuka ebusweni bam kunye nomzimba wam andazi ukuba kutheni abantu becinga ukuba andinakulwa, kodwa ndiyaqhubeka ndibonisa ukuba andoyikiswanga ngesizathu.
“Ndikhuthazekile ukoyisa nabani na naye wonke umntu. Kuhleli kuphela ukulungiselela. Umlo onzima uyeza nxamnye noFulton, kodwa sinengqondo yokuphumelela nokudibanisa ukwahlulahlula. Silungiselela umntu oza kuhamba kakhulu, oya kuba lula ngakumbi. Ndiyazi ukuba ukhawuleza kakhulu, kodwa yonke into iza nomsebenzi onzima, ukuzinikela kunye noqeqesho. Ndinazo zonke izixhobo zokuphumelela kwaye ndingqina ukuba ndingoyena mntu ubalaseleyo kwi-bantamweight emhlabeni, ”uvale ngalo mazwi uBrandon, umntakwabo owayesakuba yintshatsheli ye-WBC lightweight kwihlabathi u-Omar Figueroa.
(nguKristian von Sponneck)
I-cruiserweight ye-cruiserweight ye-Jordan Thompson kunye ne-Matchroom
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UEddie Hearn, Jordan Thompson, Igumbi lomdlalo	0
Ubunzima be-Cruiserweight Jordan Thompson Utyikitye isivumelwano sokukhuthaza ukulwa kunye UEddie Hearn kwaye Igumbi lomdlalo.
U-6 '6 "oneminyaka engama-28 ubudala waseManchester uphumelele yonke imilo yakhe elishumi ukusukela oko wajika ubuchwephesha ngoDisemba 2015 - kunye nesibhozo sezo mpumelelo eza ngaphakathi kumgama- kwaye wonwabele udidi lwehlabathi olwahlula-hluliweyo yi-WBC Heavyweight World Champion uTyson Fury kunye Owayengukumkani we-Cruiserweight yangaphambili u-Oleksandr Usyk.
'Uneengxaki' uye wanengxaki yokuyeka ukusebenza kwiirhafu kodwa ngoku ujonge phambili ekwenzeni uphawu kwiBritish Cruiserweight yeBritish equlathe izinto ezithandwa ngabantu abalingana noMartroom uLawrence Okolie, uTommy McCarthy noChris Billam-Smith.
“Andinakulinda ukuba ndiphinde ndiqhubeke, ikhono lam lomsebenzi bendiwenza ngoku kodwa ngoku ndilapha kwaye ndikulungele ukufezekisa amandla am,” utshilo uThompson. Ndisoloko ndixelelwa ukuba umonde yinto elungileyo kwaye ixesha liyinto yonke. Ixesha lam ngoku.
“Bendisoloko ndigaya okwexeshana ngoku, kwindawo yokuzivocavoca ndihlala ndilungile ngoko ndinemincili nje yokuba ekugqibeleni ndibuyele apho ndize ndingene ngegiya. Ndikwindawo entle kakhulu ngoku kunye neqela elimangalisayo emva kwam kunye nomgqugquzeli obalaseleyo kwishishini.
“Iinjongo zam emanqindini zilula kakhulu, ukuba yiNtshatsheli yeHlabathi, ndizalisekise amandla am kwaye ndenze bonke abo bakholelwa kum bazingce. Kananjalo nokukwazi ukongeza kwingqokelela yosapho yeeNtshatsheli zeHlabathi ngokuqinisekileyo! Xa konke kuthethiwe kwaye kwenziwe nje ukuba uMama, uTata kunye nosapho banelunda ndiya kuba ngumntu owonwabileyo. ”
“Ndiyakuvuyela ukwamkela iJordani kwiqela leMatchroom kwaye ndijonge phambili ekukhokeleni inkqubela yakhe kwibala elibomvu elishushu lasekhaya le-Cruiserweight,” utshilo uSihlalo weMidlalo waseMatchroom uEddie Hearn. “IJordani yitalente entsha enika umdla, enzima kwaye ijonge indima ngaphakathi nangaphandle kweringi.
"Icandelo le-Cruiserweight lisemlilweni okwangoku kwaye ndiqinisekile ukuba iJordani izakube ibukele iTommy McCarthy vs Chris Billam-Smith Fight Camp ibonakalisa umdla kwinyanga ezayo njengoko ejonge ukusebenza kwi-Titles zasekhaya nangaphaya."
UArtur Beterbiev vs.Joe Smith Jr kwiMSG, nge-18 kaSeptemba?
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UArtur Beterbiev, IBeterbiev vs.Smith Jr., UJoe Smith Omnci	0
UArtur Beterbiev vs.Joe Smith Omnci
I-Cathedral ye-Boxing, eMadison Square Garden-ngoSeptemba 18?
I-Shuttle diplomacy yokuqokelelwa kwesantya njengeGosa eliPhezulu u-Bob Arum, uceba ukubonisa umdlalo wamandla amakhulu phakathi kwentshatsheli ye-World Boxing Council UArtur Beterbiev waseRussia (16-0, 16 KOs) kunye neqela le-WBO UJoe Smith Omnci eUnited States. UJr. (27-3, 21 KOs), ngoSeptemba 18, mhlawumbi kwiCathedral yeBhokisi yeMadison Square Garden.
Kumlo wamva nje waseBeterbiev, wabetha uAdam Deines kumjikelo we-10 ku-Matshi ophelileyo, kwindawo awayephuma kuyo eyonzakeleyo kwaye echacha kwiCovid-19.
Kwelakhe icala, uSmith oneminyaka engama-28 ubudala woyisa uMaxim Vlasov ngesigqibo esimalunga nemijikelo eli-12 ku-Epreli ophelileyo kumlo osondeleyo kakhulu nokhuphisanayo.
Lo ngumdlalo okhanyayo abalandeli abafuna ukuwubona. UBeterbiev noSmith bangqina ubungqina babo. Ngoku bafuna umgangatho wegolide.
UMike Tyson ugqiba iminyaka engama-55
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	mike tyson	0
Usuku lokuzalwa olumnandi uMike Tyson!
Esinye sezona zinto zinzima zembali kwimbali, Mike Tyson, ubhiyozela iminyaka engama-55 yokuzalwa namhlanje.
Uzalelwe eNew York ngo-1966 kwaye wabizwa ngokuba nguMichael Gerard Tyson, ikhondo lakhe lomsebenzi lijikeleza indawo eyahlukeneyo kunye nezinto azithandayo kwimbali. UTyson khange abe yimbethi manqindi ebalaseleyo, kodwa uyinkuthazo kunye ne icon.
UTyson waphumelela amatyeli amabini kwihlabathi liphela ngeminyaka yoo-1980, eyintshatsheli emncinci embalini ukubamba phezulu intshinga, nge-22 kaNovemba ngo-1986 woyisa uTrevor Berbick eneminyaka engama-20 kuphela, iinyanga ezi-4 neentsuku ezingama-22.
UMike Tyson, ilungu leCanastota Hall of Fame, okwangoku ukwimo entle kwaye uzigcina exakekile ejonge kwishishini lakhe lobuqu.
UMichael Conlan ujongene no-TJ Doheny kungquzulwano lwase-Ireland ngo-Agasti 6
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	IConlan vs. Doheny, Feile uMthendeleko wePhobail, UMichael Conlan, MTK, TJ Doheny	0
UMichael Conlan vs TJ Doheny
IFark Park, iBelfast, eMantla eIreland- 6/8/21
UMichael Conlan izakubuyela eringini ngokuchasene neyayiyintshatsheli yehlabathi TJ Doheny eFalls Park eBelfast kweli hlobo.
Umlo wangoLwesihlanu we-6 Agasti uphakanyiswa liGosa eliPhezulu kwaye uyakuba yinxalenye ye- Feile uMthendeleko wePhobail, kunye nokungqubana kwe-Ireland yonke phakathi kweConlan (15-0, 8 KOs) kunye neDoheny (22-2, 6 KOs) ekhanyisa ikhadi.
UConlan ubuyile kulandela ukuphumelela kwakhe u-Ionut Baluta ngo-Epreli, kunye nenkwenkwezi engoyiswanga ejonge ukuhambisa inyathelo kufutshane nakwisihloko sehlabathi esidutyulwe kwi-super-bantamweight.
Ulungiselele olona vavanyo lwakhe lunzima ukuza kuthi ga ngoku ngokuchasene noDoheny, owayebambe isihloko se-IBF kwihlabathi ukusukela ngo-2018 ukuya ku-2019, kwaye uzakuthatha inxaxheba kumlo wakhe wokuqala kwilizwe lakhe laseIreland.
UConlan wathi: “Ndonwabe kakhulu ukubuya ndilwe edolophini yam. Kwi-2019 ibikhethekile kodwa ndiyakholelwa ukuba kulo nyaka izakubakhona njengoko silambile ngenxa yeziganeko zobhubhane kodwa nge-6 ka-Agasti iya kubonisa ukuba iBelfast ibuyile!
Kuliwonga ukubelana ngeringi no-TJ, ndinentlonipho enkulu kuye kwaye impumelelo yakhe yayiyintshatsheli yehlabathi, ndiyakholelwa ukuba yeyona mfazwe yam inzima ukuza kuthi ga ngoku kwaye ndiza kuyenza eyona ngxelo yam inkulu kumnqweno wam wokuba lihlabathi. yintshatsheli. ”
UDoheny uthe: “Ndonwabe nyhani ukubuyela esithubeni emva kokuphuma kwiringi ngaphezu konyaka. Eli iya kuba lithuba lam lokuqala ukulwa kumhlaba waseIreland kwaye yeyiphi indlela yokwenza ukubuyela ekhaya.
"Ngokuphambili ngamagqala amabini aphambili eIreland aya kuyo phambi kwesihlwele esikhulu. Ayibi nkulu kakhulu kunale yokungqubana kwe-Ireland yonke kwaye abalandeli bakunyango lokwenyani.
“Olu luhlobo lomlo ebendikulangazelela okokoko ndilahlekelwe sisigqibo kuDanny Roman kumanyano lwetayitile lehlabathi. Ukuchasana kwinqanaba eliphezulu yeyona nto iyandikhuthazayo kwaye iyandinceda ukuphakamisa umdlalo wam kwaye andinakulindela oku. ”
Ngale mini: UMiguel Velázquez woyisa isihloko se-WBC lightweight
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	UMiguel Velázquez, Saensak Muangsurin, IVelázquez vs Muangsurin	0
UMiguel Velázquez vs Saensak Muangsurin
Ibhotwe lezemidlalo laseMadrid, eSpain-nge-30 kaJuni, ngo-1976
KwiNdlu yeMidlalo yaseMadrid, UMiguel Velázquez Ukusuka kwii-Canary Islands, iphumelele ngokuchasene ne-Southpaw Thai, Saensak Muangsurin, ngokudlula kumjikelo wesihlanu wokungafaneleki, Ngolu loyiso woyisa ubuntshatsheli be-WBC engasindi. Usompempe womlo yayingu-Abraham Chavarría waseMexico.
Amathemba amabini eTurkey kwimilo yesihloko ye-UBO eTirana, eAlbania ngoJulayi 24
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDilara Yucel, UHasan Kubilay Alcu, Kubilay Alcu, UBO, Umbutho waManqindi kwindalo iphela	0
I-Hasan Kubilay Alcu vs I-TBC
UDilara Yucel ngokuchasene ne-TBC
Amathemba amabini angoyiswanga eTurkey, U-Hassan Kubilay Alcu kwaye UDilara Yucel, bazakhawuleziswa xa besilwela i-Universal Boxing Organisation ™ (UBO) izihloko ngoMgqibelo kaJulayi 24
E-Tirana, eAlbania, bobabini abasuka e-Istanbul bazakuthatha abachasi ukuze baqinisekiswe ngezihloko ze-UBO zaseYurophu ezingenanto kwiLight Heavyweight nakwiSuper Welterweight ngokwahlukeneyo.
UKubilay Alcu (26) wajika ngobungcali ngo-Novemba wonyaka ophelileyo, kwaye ukusukela oko wahlanganisa ukoyisa ngokuthe ngqo kane, ezifumanela igama elithi "Mini Tyson".
Akasadluli kwimijikelo emibini, ke kuya kuhlala kubonakala ukuba uza kumelana njani nomgama wobuntshatsheli ukuba akakwazi ukuthumela umdlali welinye iqela kumjikelo wokuqala.
Okwangoku ishumi elinesixhenxe kuphela, uDilara “She Wolf” Yucel uthathwa ngokuba lelinye lawona mabhinqa athembekileyo eSuper Welterweights emhlabeni.
Ingcali ukusukela ngo-Okthobha ophelileyo, sele eyi-6-0 (5) kwaye unomdla wokufumana iwonga lehlabathi ngokukhawuleza.
UJames Cook: IYarde iya kulawula umhlaba
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	U-Anthony Yarde, James Cook	0
Ukongezwa okutsha kwi-Ilford yokuzingca kweengonyama kugxininisa oko U-Anthony Yarde ngaphezulu kokufumanekayo ukuze ube yintshatsheli yelizwe elinzima.
UJames Cook MBEOwayesakuba yintshatsheli yase-Bhritane kunye ne-European superweightweight, usandula ukuthunyelwa enkampini ukuba asebenze no-Yarde kunye nomqeqeshi wakhe u-Tunde Ajayi, ukubonelela ngengcebiso enobulumko kwaye abe liliso elinamava kwiqela elisebenza kwi-Box Up Crime yokuzivocavoca Intliziyo kaIlford.
U-Yarde, 29, owacel 'umngeni isihloko seWBO ngokuchasene noSergey Kovalev kwi2019, ubuyile kumsesane ngoJulayi 10 kwiRoyal Albert Hall. 'Isilwanyana esivela eMpuma' esizimeleyo sijonge ukubeka uphawu lwaso kwisahlulo kwakhona emva kokuphulukana namanqaku amancinci kumlobi waseManchester uLyndon Arthur ngoDisemba.
“Ndiyingonyama endala!” Yatsho intsomi kaHackney ngokuhleka. “Ndilapha nje ke ukuba kukho into engahambanga kakuhle ndiza kuzama ukuyilungisa ndixelele uTunde. Abantu banokucinga ukuba ndilapha ndikhwaza, kodwa ayisiyiyo loo nto, umbono uphela kukubona okungahambi kakuhle kwaye ujonge kwinto esinokuyenza ngcono. Ndiza kubaxelela into endiyicingayo.
“Into endiyithandayo ngaba bafana bayamamela, baliqela eliselutsha elizimisele ukufunda kumntu okhe walapho kwaye wakwenza oko. Ndilapha ukuza kulungisa kwaye ndiza kuthi 'uyazi yintoni, nantsi into oyenzayo kule meko', ”wongeze watsho u-62, oza kuzisa amava kunye nokuzola ekuqhubeni inkqubo.
“Ngokuqinisekileyo, kuba xa usondela kufutshane nomlo ungabanjwa yiyo kwaye ungaziboni izinto. Ndilapha ukuzikhusela kuloo nto kuba bendikhona kwaye ndinokujonga izinto ekusenokwenzeka ukuba azizifuni.
“Inyaniso ibaluleke kakhulu kumlobi kwaye, njengoko benditshilo ebantwini, ukuba abayiva inyani bakuva ububhanxa. Bakho ukuze baphile kwaye kufuneka uthembeke. ”
UCook unyanzelisa ukukhululwa kwakhe kubandakanya iphepha-mvume elipheleleyo lokuthetha ngengqondo yakhe kwaye athethe into ayibonayo.
“Xa babethetha nam ndathi ukuba andiyiyo loo nto andizukuba lapha. U-Anthony yindoda yakhe kwaye ndim indoda endala, ke ukuba andithethi inyani ayizukusebenza le. Ndilapha ukuze ndiqiniseke ukuba inyani iyathethwa.
“U-Anthony unentliziyo yonke emhlabeni kwaye kungenzeka ukuba luzolile olumfunayo xa emngqongile. Xa wonke umntu esongelwe yimvakalelo mhlawumbi bayayiphosa. ”
Kwaye ukusuka kwisithambiso sakhe esifutshane sokuzisa ucwangco emhadini wengonyama, uCook uqinisekile ukuba iYarde, kungekudala, iyakuba yikati ephezulu yoluhlu.
“Mamela, ngokuqinisekileyo uya kuba yintshatsheli yehlabathi. Wayilwela enye ngaphambili kwaye yayiyinxalenye yamava okufunda apho azokwazi ukuba makenze ntoni kwixesha elizayo. Ngokuqinisekileyo uwulungele umlo wetayitile yehlabathi. ”
Intshatsheli ye-Commonwealth Light-Heavyweight uLyndon Arthur (18-0, 12 KOs) ubhala nge-10 kaJulayi kwiRoyal Albert Hall kwaye wenza ukhuselo lokuqala lwegama lakhe le-WBO Inter-Continental ngokuchasene ne-Italiya uDavid Faraci (15-0, 7 KOs).
Utshutshiso olunobukrakra lwe-Mancunian u-Anthony Yarde (20-2, 19 KOs) ubuyela kumjikelo weshumi.
Kwibhili ye-WBO ubekwa kwindawo yokuqala kwi-Super-Middleweight uZach Parker (20-0, 14 KOs) uyakukhusela ibhanti yakhe ye-WBO International ngokuchasene ne-Uzbek Sherzod Khusanov (22-2-1, 10 KOs).
I-WBO ibekwe kwindawo yesine kwi-Super-Featherweight, u-Archie Sharp (19-0, 9 KOs) udibana noMarcio Soza waseNicaragua (21-6-2, 12 KOs) kunye nobuntshatsheli be-WBO Global obungenamntu emgceni.
Italente ebalaseleyo ye-bantamweight uDennis McCann (9-0, 5 KOs) ujongene neTanzania uJohn Chuwa (20-4, 10 KOs).
Kwenye indawo ekhadini, i-2016 Olimpiki u-Muhammad Ali (2-0) uyakuba nesabelo sakhe sesithathu ngokuchasene no-Lee Glover (11-4, 3 KOs), kunye nomculi we-Kweight-KO uSam Noakes (5-0, 5 KOs) kunye noKhanya- Ubunzima bendoda eyayisakuba yintshatsheli yoLutsha kwiOlimpiki uKarol Itauma (2-0, 1 KO) naye.
UColbert noNyambayar bazakulwela ibhande lethutyana le-WBA ngalo Mgqibelo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UChris Colbert, UColbert vs.Nyambayar, UTugstsogt Nyambayar	0
UChris Colbert vs.Tugstsogt Nyambayar
Isidima sePaki yezeMpilo kwiCarson, eCalifornia, e-USA-3/7/21
UChris Colbert uzakwenza ukhuselo lwesibini lweWBA yetayitile ye-Super Featherweight isihloko ngalo Mgqibelo ngokuchasene nomngeni onzima UTugstsogt Nyambayar kwiNdawo yezeMidlalo yezeMpilo kwiSidima eCarson, eCalifornia.
UmMelika ungomnye wabalweli beflashier namhlanje, nangona ukuthandwa kwakhe kusaqhubeka. Inzalelwane yaseBrooklyn ineminyaka engama-24 kuphela ubudala kwaye inesimbo esihle somdlalo wamanqindi, onentshukumo elungileyo, ukuzikhusela okugqwesileyo kunye nevolumu ephezulu yenqindi eyenza yonke imilo yakhe inomdla.
"I-Prime Time" iphumelele ibhanti nge-18 kaJanuwari ka-2020 ngesigqibo esivumayo esiphumelele iPanama's Jezreel Corrales. NgoDisemba wabuyela kumsesane ukwenza ukuzithethelela kwakhe okokuqala kwaye wayisombulula ngokunkqonkqoza kwezobuchwephesha kwimijikelo eli-11 ngokuchasene nePanamanian Jaime Arboleda kumboniso wolawulo.
Ngoku uzakuba no-Mongolian Nyambayar phambi kwakhe. Wamkele umlo ngaphandle kweeveki ezimbalwa kodwa uza nerekhodi elikhulu kwaye ungumceli mngeni oyingozi kwimbaleki. Uneminyaka engama-29 kwaye woyisile abachasi abafana no-Oscar Escandón noClaudio Marrero.
Umsitho wobunzima uza kubanjwa ngolwe-Sihlanu, apho kufuneka babenobunzima beepawundi ezili-130 ukuze bakulungele ukulwa. NgoMgqibelo bazongena eringini balwele ibhanti.
UColbert uphumelele i-15, akoyiswanga kwaye ubethe abadlali abathandathu, ngelixa uNyambayar ephumelele i-6, ilahleko enye, kunye ne-12.
UFlavius ​​Biea wenza ukuba i-IBA ikhusele isihloko se-Intercontinental eRomania ngoJulayi 30
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UFlavius ​​Biea, IBA, Umbutho wamanqindi wamanye amazwe, UMihail Leu	0
UFlavius ​​Biea ubuya ngoJulayi 30
UFlavius ​​Biea Umlo olandelayo, ukhuselo lwe-IBA Intercontinental ngoJulayi 30, 2021 eTimisoara, bahlala kwi-TV ye-PRO.
Owayesakuba yintshatsheli ye-IBA Intercontinental yintshatsheli uFlavius ​​Biea wenza imithombo yeendaba kushicilelo lukazwelonke lwaseRomania kunye neTV kunye nembethi manqindi yaseRomania uMihail Leu, owayesakuba yintshatsheli yeWBO kwihlabathi engoyiswanga kwimilo engama-2
I-Tursynbay Kulakhmet ngoku ijongene no-Aleksei Evchenko eKazakhstan nge-10 kaJulayi
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	#MTKFightNight, UAbay Tolesh, Uncedo lweMedet, UAleksei Evchenko, Alexander Sharonov, UArman Rysbek, UBagdat Uaydayev, UDauren Yelussioniv, UDenis Bakhtov, Isa Chaniev, UIvan Dychko, Kulakhmet vs.Evchenko, URakhat Seitzhan, URay Seitzhankov, URonnie Clark, ISultan Zaurbek, UTalgat Shayken, I-Tursynbay Kulakhmet	0
I-Tursynbay Kulakhmet vs. Aleksei Evchenko
IAlmaty, Kazakhstan -10 / 7/21
Imvakalelo yaseKazakhstan I-Tursynbay Kulakhmet ngoku siya kunyuka sinamava UAleksei Evchenko xa enkulu #MTKFightNight iintloko ukuya eAlmaty kwinyanga ezayo.
Umsitho wenzeka ngoMgqibelo nge-10 kaJulayi, kwaye uza kusasazwa kwi-ESPN + ngokudibana neTop Rank eMelika, kwi-SportTimeKZ e-Kazakhstan, nakwi-IFL TV kwihlabathi liphela.
Ibona i-Kulakhmet (3-0, 2 KOs) inekhaya eliyifaneleyo emva kokulwa kwayo okokugqibela e-UK nase-Dubai, isiya kulwa neyayiyintshatsheli ye-WBO yaseYurophu neyaseRussia u-Evchenko (19-14-2, 8 KOs) .
Umdlali oneminyaka engama-37 uyaziwa ngokuqina kwakhe, emisiwe kukhuphiswano lweengcali ezingama-35, uKulakhmet ejonge kuyekisa xa bedibana.
Kwenye indawo kwikhadi eliphambili, ISultan Zaurbek (I-10-0, i-7 KOs) ijongene nolona vavanyo lwakhe lunzima ukuza kuthi ga ngoku URonnie Clark (21-4-2, 10 KOs), uNurtas Azhbenov (11-0, 4 KOs) izikwere kunye Isa Chaniev (14-3, 6 ii-KOs), UTalgat Shayken (4-0, 2 KOs) idibana Alexander Sharonov (I-12-5-2, ii-6 KOs),
UIvan Dychko (9-0, 9 KOs) izikwere zihamba kunye UDenis Bakhtov (39-18, 26 KOs), kunye UDauren Yelussioniv (8-1-1, 7 KOs) zingqubana nayo UArman Rysbek (7-1, 6 ii-KOs).
Ikhadi elingaphantsi likwabonisa inani leenkwenkwezi ezikhulayo ezivela eKazakhstan nangaphaya, kubandakanya UBagdat Uaydayev, URay Seitzhankov, UAbay Tolesh, URakhat Seitzhan, Uncedo lweMedet, kunye nokuninzi.
Ajagba vs Sánchez, Kownacki vs Helenius, Anderson vs Tereshkin kaJulayi 24
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UAdam Kownacki, Ajagba vs Sánchez, UAnderson noTereshkin, deontay Wilder, Efe Ajagba, UFrank Sanchez, Ubushushu vs Wilder 3, UJared Anderson, IKownacki vs Helenius 2, URobert Helenius 2, tyson ingqumbo, UVladimir Tereshkin	0
Efe Ajagba vs UFrank Sánchez
UAdam Kownacki ngokuchasene noRobert Helenius 2
UJared Anderson vs.Vladimir Tereshkin
I-T-Mobile Arena eLas Vegas, e-USA-24/7/21
Imilo emine emikhulu esindayo kubusuku obuyimbali eT-Mobile Arena eLas Vegas. Izinto ezintathu ezingaphoswa kukuphakama kobunzima obunzima ziye zongezwa kwi-underboard ye-PPV ebhalwe phantsi kumlo wesithathu olindelweyo phakathi kwe-WBC kunye neentshatsheli zehlabathi ezinobunzima. UTyson "I-Gypsy King" Ubushushu kunye neentshatsheli zehlabathi zangaphambili UDeontay “IBomber Bomber” Wilder.
Kumnyhadala ophambili we-10, u-2016 wase-Nigerian Olimpiki "Omnye yedwa" Efe Ajagba iyakuthatha into engabethwanga UFrank "I-Flash yaseCuba" iSánchez. Umabonwakude we-PPV ukwabandakanya ukuphindaphinda okumjikelo-12 phakathi kweFinland URobert "I-Nordic Nightmare" iHelenius kunye neenkwenkwezi zasePoland UAdam "Babyface" Kownacki, owamiswa nguHelenius kumjikelo wesine wokulwa kwabo okokuqala ngo-Matshi 2020.
Umdlalo ovulekileyo we-PPV uza kubona owazalelwa eToledo UJared "Oyena Mntwana Ubalaseleyo" UAnderson yiya eklasini ngokuchasene nomntu ongoyiswanga waseRussia UVladimir Tereshkin.
Amatikiti eFury vs Wilder III ayathengiswa ngoku kwaye anokuthengwa www.sifumafoods.com or www.axs.com. Umnyhadala uphakanyiswa liGosa eliPhezulu, iBombZquad Promotions, i-TGB Promotions kunye neFrank Warren's Queensberry Promotions. INkulumbuso yeNkulumbuso yeNkulumbuso
I-Ajagba (15-0, 12 KOs) yajika yangoJulayi ka-2017 kwaye yakhawuleza yazibonakalisa njengenye yecandelo elineengcwangu. Ubonakalise amandla akhe xa waphakama emanqeni wayokukhupha u-Iago Kiladze ngo-Disemba ka-2019, kwaye kwiinyanga ezintathu kamva, waqhekeza wamisa owayesakuba ngumceli-mngeni wehlabathi isihloko uRazvan Cojanu kumjikelo wesithoba. Ugqibele ukulwa ngo-Epreli eTulsa, e-Oklahoma, kwaye wanqonqoza uBrian Howard ngesandla esinye sasekunene kumjikelo wesithathu.
"Ndiwongekile ngokulwa kwiFury-Wilder III PPV njengomsitho ophambili," utshilo u-Ajagba. “Bendilinde ngomonde eli thuba lokuba ndibonise izakhono zam. Abalandeli bam-nabagxeki-banokulindela ukubona i-jabs, intshukumo yentloko, ukuhamba ngeenyawo kunye namandla kwizandla zombini ngokuchasene noFrank Sánchez. Nge-24 kaJulayi izakuba bubusuku obukhethekileyo ku-'Onye Kuphela 'u-Efe Ajagba. "
Ukuma ngaphandle kwe-Amateur evela eCuba yakhe, eSánchez (18-0, 13 KOs) ngoku uqeqesha eSan Diego nomqeqeshi uEddy Reynoso. U-28-ubudala uhlala exakekile ekuphakameni kwakhe kwinqanaba le-heavyweight, efumana amanqaku amathathu kwi-2020 njengoko wayefumene isigqibo ngamxhelo mnye ku-Joey Dawejko kwaye wamisa uBrian Howard noJulian Fernandez. Kutshanje uSanchez uphumelele isigqibo sobuchwephesha ngaphezulu kukaNagy Aguilera ngoMeyi kwaye uzakukhangela uloyiso olubalulekileyo kwabo bangabethwanga u-Ajagba onokuthi amphakamise kwinqanaba le-heavyweight.
"Ndichulumancile ukwenza ityala lam njengelona liphezulu kwitayitile yobunzima obunzima kwelona khadi lihlawulelwayo lokujonga unyaka," utshilo uSánchez. “Ndijonge phambili ekulweni i-Efe Ajagba kwaye ndiphumelele. Abalandeli bamanqindi bafuna ukubona owona mlo ulungileyo. Abantu bathi i-Efe Ajagba iyathintelwa, yiyo loo nto ndikhethe ukulwa naye. Abalandeli bangalindela umlo omkhulu phakathi kwabadlali ababini abangoyiswanga ngoJulayi 24. ”
Kutyelelo lwakhe lwesibini, uHelenius (30-3, 19 KOs) wothusa isihlwele kwiziko iBarclays ngokunika uKownacki ilahleko yokuqala yomsebenzi wakhe nge-TKO yomjikelo wesine. Uzalelwe eSweden kwaye esilwa eMarihamhamn, eFinland, uHelenius wazimisa njengomnye wabadlali abaphezulu baseYurophu kwaye wakhupha u-Erkan Teper ngoSeptemba ka-2018 ukuze anyuse amanqanaba. Ngaphambi kokulahla ityala lakhe laseMelika kuGerald Washington kwi2019, oneminyaka eyi-37 waphumelela imilo emithandathu kwezi zisixhenxe zokugqibela, eyedwa isiphako sakhe nxamnye noDillian Whyte.
“Ndikulangazelele ukuphinda umdlalo wam wokuqala ndidlala neKownacki ngoJulayi 24,” utshilo uHelenius. “Abalandeli bomdlalo wamanqindi bangalindela omnye umlo ongakholelekiyo ngesandla sam siphakamise ukuphumelela kwakhona. Yonke iFinland iya kuba semva kwam xa ndibonisa umhlaba ukuba kutheni ndilifanele idabi lehlabathi. Eyona njongo yam kukuba yintshatsheli yehlabathi kwaye ngelishwa kuAdam ume endleleni yam. ”
U-Kownacki (20-1, 15 KOs) uzakufuna ukuziphindezela ngokulahleka kwakhe kokuqala xa ephinda ekhumbula uHelenius ngoJulayi 24. UKownacki oneminyaka engama-31, owazalelwa eLomza, ePoland wafudukela eBrooklyn xa waye Isixhenxe, wayeqatshelwe ngokuzimisela kwakhe kwaye wayeqhubela phambili kwitayitile yehlabathi eyadutyulwa ngokunkqonkqoza kwimilo yakhe esixhenxe yokugqibela phambi kohlaselo luka-Matshi 2020 eHelenius. U-Kownacki uphumelele u-Charles Martin owayesakuba yintshatsheli yehlabathi kwaye owayekhe wangumceli-mngeni kwitayitile u-Gerald Washington no-Chris Arreola. Idabi lakhe lika-Agasti 2019 ngokuchasene no-Arreola usete iirekhodi zeCompuBox zezinto ezisindayo kwizibhakana zamandla ezidityanisiweyo eziphosiweyo zaza zafika.
"Ndonwabe kakhulu ukubuyela eringini," utshilo uKownacki. Lo bhubhani uzenze nzima izinto kuye wonke umntu, kodwa izinto zibuyela esiqhelweni. Ukuba yinxalenye yayo yonke imithwalo enzima yokuhlawulwa komntu ngamnye ngombono onje uziva ulungile, kwaye kuyinto entle kubalandeli bezemidlalo yethu. Le ntlawulo yokujonga nganye iya kuthathwa inyathelo ukusuka phezulu kuye ezantsi. Andikwazi kulinda ukuba ndiphindezele kuRobert Helenius. Kube lide ixesha elide ndilindele umdlalo wempi, kodwa ndiza kufumana uloyiso ngoJulayi 24. Ndivakalelwa kukuba izinto zizakubuyela esiqhelweni kwaye ndizakungqina ukuba ndingomnye wabadlali abaphezulu emhlabeni. ”
U-Anderson (9-0, 9 KOs) khange ayingcamle intsimbi yokugqibela njengengcali, ugqatso olubalaseleyo oluqale ngokumiswa komjikelo wokuqala kwindawo yakhe yokuqala engaphantsi kweminyaka emibini eyadlulayo. Uneenkqonkqo ezintlanu zokuqala kwaye waba yinkwenkwezi yokuqhekeka kweMGM Grand Las Vegas Bubble, apho waya khona ngo-5-0. Emva kokuvala umdlalo wakhe weBubble ngenkqonkqozo lesithandathu ngaphezulu kukaKingsley Ibeh, uAnderson wabuya ngo-Epreli 10 ngomjikelo wesibini kaJeremia Karpency. UAnderson wayeliqabane eliphambili likaFury kwi-Wilder rematch kwaye uya kusebenza kwisikhundla esifanayo kumlo we-trilogy. UTereshkin (22-0-1, 12 KOs) i-6'6 southpaw, ngumqeqeshi oneminyaka eli-14 ophumelele iimfazwe ezili-14 ezilandelelanayo okoko wabamba umntu omnye kwileja yakhe.
29 Isilimela 2021
I-AIBA iqinisekisa iimbethi manqindi umlo olungileyo kunye nohlengahlengiso
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Umbutho wamanqindi wamanye amazwe	0
Umbutho wamanqindi wamazwe aphesheya (i-AIBA) namhlanje utyhile inkqubela phambili enkulu kwiphulo labo lokuguqula amanqindi ngokuqeshwa kwengcali yolawulo ezimeleyo uNjingalwazi uGqirha Ulrich Haas kunye nesiqinisekiso sokuba kuya kwenziwa uphicotho-zincwadi olukhulu oluzimeleyo, ukongeza kuphando oluzimeleyo lukaNjingalwazi Richard McLaren usompempe nokugweba.
Isibhengezo senziwe nguMongameli we-AIBA u-Umar Kremlev ngexesha lenkomfa yeendaba eLausanne kwaye iphawula amanyathelo akutshanje yi-AIBA yokuxhasa imigangatho ephezulu kulawulo, ukuthembeka kwezemali kunye nokuthembeka kwezemidlalo.
UNjingalwazi Ulrich Haas - okhokele kutshintsho kulawulo lweWorld Anti-Doping Agency (WADA) - uzakuba ngusihlalo weQela elizimeleyo loHlengahlengiso loLawulo eliquka iingcali kwezomthetho nezolawulo. Iqela liza kuvavanya imibutho yolawulo yangoku ye-AIBA, livavanye la malungiselelo ngokuchasene nezona ndlela zisebenza kakuhle zamanye amazwe kwaye likhuphe iingcebiso ezibambekayo zokuphucula ngakumbi. Okwangoku, i-AIBA ikwinkqubo yokugqibezela isivumelwano kunye nenkampani enkulu yokuphendula ukuze iqhube uphicotho oluzimeleyo olupheleleyo lwemali yomanyano.
Umongameli we-AIBA uKremlev uthe:
“Njengoko ndathembisayo xa ndonyulwa njengomongameli we-AIBA, i-AIBA isebenza ukuba ibe likhaya lokwamkela, elomeleleyo nelizinzileyo leembethi manqindi kwihlabathi liphela. Sinyule iingcali ezizimeleyo ukuba zisikhokelele siye kwelona nqanaba liphezulu lolawulo nokuziphatha kwezemidlalo. Sikwakhusele uzinzo kwezemali kumbutho wethu ngoncedo lwenkxaso mali evela kwiGazprom, ngenkxaso ethe kratya kwezorhwebo ezayo. Kodwa asiyi kuyeka apho. Zonke ezi zinto ziyahlangana njengenxalenye yotshintsho olukhulu esiluzisayo ukwenzela ukuba iimbethi manqindi ziqiniseke ngekamva labo, zigweba ngokufanelekileyo kwaye zifumane umvuzo wemali kwimilo yabo. ”
Ezi zibhengezo zilandela ukuqeshwa kukaNjingalwazi Richard McLaren ukuba enze uphando oluzimeleyo kusompempe nasekugwebeni itumente yomdlalo wamanqindi eRio 2016. UNjingalwazi McLaren, ojoyine inkomfa noonondaba ngevidiyo, uchaze igunya lophando lwakhe kwaye wakhuthaza abo babetha impempe ukuba banxibelelane neqela lophando ngqo, ukuze iingxaki ziqale ukujongwa.
UNobhala Jikelele we-AIBA kunye ne-AIBA yeQela leHlabathi kunye neQela leHlabathi kwibhokisi yomdlalo wamanqindi u-István Kovács uthe:
“Iimbethi manqindi kudala zilindile ukubona ezi ntlobo zohlaziyo ezizakuqinisekisa ilungelo labo lokulwa ngokungenamkhethe nembuyekezo yemali kwimizamo yabo. Ukongeza ekwenzeni izindululo ezivela kwiingcali zethu ezizimeleyo, sikwasebenza ukwenza ezinye izinto ezininzi zokuphucula; ukusuka ekwandiseni ukungafihli kwethu nokwenza ulwazi oluthe kratya malunga nemigaqo-nkqubo yethu ukuba ifumaneke esidlangalaleni, ukujonga indlela esinokuphucula ngayo ukuthembeka kwezemidlalo ngokufumana amanqaku nangamanye amanyathelo. Asizukuthandabuza ukwenza naluphi na utshintsho oludingekayo ukunika iimbethi-manqindi imidlalo eziyifaneleyo. ”
Ukuzibophelela kwe-AIBA ekuqinisekiseni ukuba iimbethi manqindi zisemngciphekweni wokulwela kwaqaqanjiswa ngakumbi bubukho beNtshatsheli yeHlabathi eRoy Jones Jr eLausanne. Uye wangenelwa kwinkomfa yoonondaba ziimbethi manqindi ezazikumgangatho wehlabathi mandulo nangoku, kubandakanya izihlandlo ezithandathu i-AIBA Intshatsheli yeHlabathi uMary Kom, intshatsheli ye-AIBA yeHlabathi ka-Roberto Cammarelle kunye neentshatsheli zamanqindi zaseJamani u-2018 uZeina Nassar.
Eyona njongo iphambili ye-AIBA kukuba likhaya elithembekileyo leembethi manqindi kwihlabathi liphela.
UGilberto “Zurdo” Barrera vs uSullivan Barrera ophumeleleyo kumgca wetayitile
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGilberto Ramirez, I-Ramirez vs Barrera, USullivan Barrera	0
UGilberto “Zurdo” Ramirez vs uSullivan Barrera
U-41-0 uGilberto “Zurdo” Barrera kufuneka adlule kuSullivan Barrera ukuze afumane ukukhanya kwebhola lomhlaba elinzima.
Ukungaphumeleli kwi-WBO Super Middleweight Champion kunye UGilberto "Zurdo" uRamirez (I-41-0, i-27 KOs), okwangoku elwela ukukhanya kobunzima obunzima, uya kuba nokuninzi kumgca kaJulayi 9th ngokuchasene nomceli mngeni wokukhanya kobunzima behlabathi USullivan Barrera (22-3, 14 ii-KOs), kubandakanya isihloko somlo wokulwa nefuthe kwaye, ekugqibeleni, ilifa lakhe lomdlalo wamanqindi,
I-Zurdo vs. Barrera, eboniswe yiGolden Boy Promotions, iya kusasazwa ngokukodwa kwi-DAZN, ihlala eBanc yaseCalifornia Stadium, kwikhaya leLos Angeles Football Club (ibhola ekhatywayo), ekumbindi wedolophu yaseLos Angeles.
Ukufumana itayitile yelizwe enobunzima obunzima kwilizwe liphela ngokuchasene nayo nayiphi na intshatsheli elawulayo-I-WBC kunye ne-IBF Artur Beterbiev (16-0 (16 KOs), WBA Super Dmitry Bivol (18-0, 11 KOs) okanye WBO Joe Smith (27-3, I-KOs ezingama-21) -Barrera umi ngendlela kaRamirez kumjikelo ophambili we-Zurdo vs iBarrera.URamirez ubekwe kwindawo yesi-12 yi-WBA kunye ne-WBO, kunye nenombolo 3 yi-IBF.
"Yile nto ifunwa ngabalandeli kodwa andiqinisekanga ukuba ngaba aba balweli bandilungele na," watsho ngesibindi uRamirez malunga neBererbiev, iBivol kunye noSmith. “Andikhange ndichukunyiswe nangayiphi na kwezi zinto zintathu zidlulileyo. Bangabaleka kangangoko bafuna, kodwa abanakufihla ngonaphakade. Ndiyazi ukuba ndingoyena uphambili kweli candelo kwaye, kungekudala okanye kamva, ndiza kube ndixhwila ibhanti ngalinye kwaye ndithatha imiphefumlo yabo nganye nganye. ”
URamirez, osandula ukujika i-30 (nge-19 kaJuni), wayengumphumi-mkhosi wokuqala waseMexico ukubamba inqaku eliphakathi lesisindo esiphakathi, awaliyekayo ngo-2019 wanyukela kwicandelo elinobunzima, apho ayi-2-0 (2 KOs) woyisa uTommy Karpency (29-6-1) kunye noAlphonso Lopez (32-3) kuDisemba ophelileyo ukubamba isithsaba seNorth American Boxing Federation (NABF).
Imbethi manqindi engahlawulwayo yaseCuba (irekhodi elingama-285-27), uBarrera oneminyaka engama-39 woyisa iintshatsheli zehlabathi ezizayo ezinje ngeChad Dawson, Beibut Shumenov kunye noMariano Natalio Carrera ngaphambi kokuba bashiye iCuba baye eMiami kwaye baguqukele phambili.
UBarrera, olwa eCuba ngendlela yaseMiami, uyi-3-3 ngokuchasene neentshatsheli zehlabathi ezidlulileyo okanye zangoku ngokuphumelela ngokuchasene noJeff Lacy (WTKO4), uKaro Murat (WKO12) noFeliksi Valera (WDEC10), belahlekelwa yiBivol (TKO12), Smith (DEC10), kunye neHolo yeNefer Andre Ward (DEC 12).
"Ndihlala ndilindele okona kulungileyo kubachasi bam," utshilo uRamirez. “UBarrera yingcali kwaye ndiyazi ukuba uzakube elungile xa kukhanyisiwe. Ubonakalisile ukuba ulilungu elinamandla xa wabetha waqhekeza umhlathi kaJoe Smith, Omnci. Ukuphumelela kukaBarrera kungavusa ikhondo lomsebenzi wakhe kwaye kuguqule indlela yam; ke, ndilungiselela olona hlobo lubalaseleyo lweBarrera, kwaye andizukuvumela nantoni na iphazamise iinjongo zam.
“Bendisebenza nzima. Kukho izinto ezintsha endizilungisileyo kwaye andinakulinda ukuzibonisa ngoJulayi 9th. Yiza ulwe ebusuku, ndiyazi ukuba konke ukusebenza kwam nzima kuya kuba nomvuzo. ”
Amatikiti axabisa i $ 150, $ 100, $ 75, $ 50 kunye ne-35, ngaphandle kweendleko ezifanelekileyo zenkonzo, kwaye ziyafumaneka ukuze zithengwe www. wwwcocmoocmelo.cim kwaye www.ytikiti.com.
UDawson ujongene noFryers kumnyhadala omtsha ophambili ngoMgqibelo, nge-24 kaJulayi ePhiladelphia
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDawson Jr vs. Fryers, ULarry Fryers, UMark Dawson Jr.	0
UMark Dawson Jr noLarry Fryers
I-2300 Arena eSouth Philadelphia, e-USA-24/7/21
Ubunzima be-welterweight UMark Dawson Jr.. izakuthatha igqala elinamava ULarry Fryers kumnyhadala ophambili wekhadi le-RDR yokuNyusa ngoMgqibelo, nge-24 kaJulayi kwi-2300 Arena eSouth Philadelphia.
Ikhadi liza kugqiba ngobusuku be-2 ye-'Crossroads 'yeeveki ezimbini kwi-2300 Arena. Umboniso we-23 kaJulayi wahlaziywa kwiveki ephelileyo kunye noNahir Albright ethatha uJeremy Hill kumsitho ophambili.
UDawson wasePhiladelphia unerekhodi ye-8-0-1 ngee-knockout ezintathu. UDawson oneminyaka engama-24 ubudala, uneminyaka emihlanu yobungcali, kwaye uza kuphumelela uRodrigo Solis nge-8 kaMeyi kwi-2300 Arena.
Iifryers zeYonkers, eNew York zineerekhodi ezili-11-4 ezinezikroba ezine. UFryers oneminyaka engama-30 ubudala yingcali yeminyaka emihlanu. Unempumelelo entle kwiCharles Natal (9-0-2). IFryers isiza ibuyela umva kwiXander Zayas nge-12 kaJuni.
Kwi-co-feature, u-Joey Dawejko onobunzima obunzima uza kukhuphisana kumdlalo osibhozo.
UDawejko waseFiladelphia unama-21-8-4 nge-12. UDawejko oneminyaka engama-21 unamava ali-12 aphumeleleyo uRicardo Johnson (1-0), uJohn Lennox (6-0), uDerric Rossy (28-7), uMark Rideout (4-0-2) U-Enobong Umohette (9-2), uNatu Visinia (11-1), uDemetrius Banks (9-1) kunye noKelvin Nunez (15-0). UDawejko uza kumiswa kumjikelo wokuqala wokumiswa kukaJoe Jones nge-1 ka-Epreli kwindawo ye-3 Arena. Umchasi kaDawejko uza kubhengezwa kungekudala.
Kwiibhawundi ezijikelezileyo ezintandathu:
UDhafir Smith (28-25-7, 4 KOs) waseFiladelphia uthatha uJoe Jones (11-4, 8 KOs) weSixeko saseJersey, NJ kumlo we-cruiserweight.
U-Edgar Joe Cortes (8-6-1, 1 KO) waseVineland, NJ ulwa noGorwar Karyah (2-2, 2 KOs) wasePhiladelphia kumlo we-bantamweight.
URasheen Brown (9-0, 6 KOs) waseFiladelphia uthatha iqela eliza kubizwa ngokuba ngumncintiswano omkhulu we-bantamweight,
Kwiibhola ezijikeleze ezine:
I-Afunwa King (3-1, 1 KO) yaseBronx, NY ilwa noClarence Whitehead (0-2) wasePhiladelphia kukhuphiswano olunzima lobunzima.
UPaul Koon (4-0, 1 KO) waseFiladelphia uthatha iqela eliza kuthiwa ngumlo onzima.
UNicolas Sullivan (3-0, 1 KO) waseNorfolk, VA ulwa noNathan Benichou (2-5, 1 KO) wasePuebla, MEX kumlo omkhulu weentsiba.
UDavid Stevens (5-0, 4 KOs) wokuFunda, i-PA ithatha umdlali welinye iqela oza kubizwa kukhuphiswano olunzima lobunzima.
U-Iman Lee wase-Yonkers, NY uya kwenza i-pro-pro yakhe ngokuchasene nomchasi oza kubizwa nge-super featherweight bout.
Amatikiti ayi- $ 75, $ 100, $ 150 kunye ne- $ 250 ye-VIP Box, kwaye anokuthengwa kwabalwa okanye athumele i-imeyile rricerivew@yahoo.com
I-Bell yokuqala ngobusuku ngabunye nge-1 PM
I-UBO Flashback: Xa i "BoxLady" yaseJamani yayiyintshatsheli!
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	IbhokisiLady, UOezlem Sahin, UBO, Umbutho waManqindi kwindalo iphela	0
U-Oezlem “BoxLady” Sahin wase-Jamani wayenerekhodi entle yama-20-1-1 ngethuba ephumelela iwonga le-Universal Boxing Organisation ™ (UBO) World Minimumweight ngoJuni ka-2016, emisa uHungary u-Agnes Draxler kwimijikelo emibini.
Nge-Agasti ka-2017 wasigcina isihloko ngesigqibo ngamxhelo-mnye malunga noSandy Coget waseFrance, kodwa ngaphambi koko wayesele ephumelele okuninzi kwikhondo lomsebenzi oqale kwiminyaka elishumi eyadlulayo.
I-Sahin yaseTurkey eyazalelwa eTurkey yaqala njengebhola ekhatywayo, kodwa yaqala umdlalo wamanqindi kwi-2002 kwaye yayiyinxalenye yeqela lesizwe laseJamani ngaphambi kokungena kwinqanaba elihlawulelwayo kwi-2007.
Ngo-2011 waphumelela ubuntshatsheli bakhe bokuqala behlabathi, xa woyisa uCorina Carlescu waseRomania kwiwonga lethutyana leWIBF Light Flyweight. UCorlescu wayeza kuba yintshatsheli yaseYurophu.
Ngo-2014 wayeka u-Thanya Tuyon wase-Thailand ukuba aphumelele iwonga le-WIBF kunye ne-GBU ye-World Minimumweight, kodwa waphinda waphulukana nabo kunyaka olandelayo ku-Gretchen Abaniel wase-Philippines ngesigqibo sokwahlulahlula.
Ukulandela ukuphumelela kwesiqhelo ekuqaleni kuka-2016 waphumelela isihloko sehlabathi se-UBO. Kwi-2018 uzamile ukongeza ingxelo ye-IBF kwi-resume yakhe, kodwa weza kancinci ngesigqibo esisondele kuJoana Pastrana eSpain.
Kodwa ngo-Matshi ka-2019 uSahin waba yintshatsheli kathathu kwihlabathi, xa wachaza owayesakuba yintshatsheli ye-WBF u-Anne Sophie Da Costa ukuba abambe isithsaba seWIBA World Minimumweight kwaye athathe irekhodi lakhe abe li-25-2-1 (8).
Ngelishwa oko bekugqityiwe ukuza kuthi ga ngoku, kodwa kutshanje ubonakalise umdla wokubuyisa isihloko sehlabathi se-UBO.
I-3-0 iphakamisa ubunzima obunzima bukaGeorge Fox kunye noFrank Warren
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGeorge Fox	0
Ukunyuka kobunzima obukhulu UGeorge Fox Utyikitye isivumelwano sokunyusa noFrank Warren sokulwa phantsi kwebhanile yokuKhuthaza iQueensberry.
Umntwana oneminyaka engama-29 ubudala, ongu-3-0 kuluhlu lobungcali emva kokwenza amabala akhe ngoJuni 2018, wagqibela ukuringa ngo-Novemba ngo-2019. UFox uya kulawulwa nguFrancis Warren.
"Ndonwabile ukubhengeza ubambiswano neQueensberry kwaye sijonge ukwenza izinto ezinkulu kwezemidlalo," utshilo uFox kuphuhliso lomsebenzi wakhe. “Ndineminqweno yokwenene yokuba yintshatsheli kwaye ndiyakholelwa, kunye nembali yokusekwa kukaFrank Warren kwezemidlalo, ndinabantu abafanelekileyo bokundikhokelela empumelelweni.
“Unamava amakhulu kwaye ebekolu hambo amaxesha amaninzi. Ndiyathemba ukuba ndiza kuba ngomnye umntu omtsha oza kufezekisa izinto ezintle. ”
Emva kwethuba lokuphuma kwiringi, uFox ukulungele ukubuyela kwicandelo lomdlalo wamanqindi, ekulungele ukwenza uphawu kwimidlalo apho alwa khona amatyeli angama-20 phantsi kwebhanti lakhe.
“Ipesenti ezilikhulu, ndicinga ukuba ifuthe ebenalo uTyson Fury kunye no-Anthony Joshua kwezemidlalo libe likhulu. Ubonile ukuthontelana kwamadoda amakhulu azivavanya kwaye aziphosa kumxube okhuphisana ukuze ube yinto enkulu elandelayo.
"Zininzi iitalente ezizayo kunye namathemba kwaye ndonwabile ukwenza indlela yam njengenye yazo kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kuphuma phambili," wongeze watsho uFox, otyhila ukuba unxibelelwano kunye neQueensberry luziva luyinto yendalo yenza unxibelelwano losapho lwakhe kuFrank Warren ngaphezulu kweminyaka emininzi.
“Ininzi imbali apho notata wam (uDon Charles) ebengumqeqeshi kaDereck Chisora ​​ngaphezulu kweminyaka elishumi elinesibini. Ndiyamazi uFrancis noFrank ukusukela ndandineminyaka esibhozo ubudala, ukunyaniseka, ke ngoko kukho ubudlelwane obude-apho, kunye nokuthembana, ukuhloniphana nokuqondana.
“Ndicinga ukuba siza kuba nemvisiswano kunye nonxibelelwano ukuze sisebenze njengeqela kwaye siphumeze oko sikholelwa ukuba sinako ukukwenza. Sibe neencoko ezininzi njengosapho ngaphakathi kwaye akukho mathandabuzo ukuba senza isigqibo esikhulu. ”
Ngaphandle kokukhathazeka ngaphezulu konyaka ungaphaya komsesane, uFox unyanzelisa ukuba ukulungele ukubetha umhlaba obalekayo kweli hlobo.
“Bekukhohlise kakhulu. Andizange ndibenalo iqonga apho ndinokulwa rhoqo rhoqo kwiinyanga ezimbalwa ukufumana amandla. Konke ibikukuqalisa kakhulu.
Ndinexesha elincinci ngaphandle komdlalo emva koko saba nemeko yeCovid, ke iimfazwe bezimbalwa kwaye bezisembindini kum. Qiniseka, okwangoku bendisebenza ngo-Tyson Fury kwaye ndenze iinkampu ezimbini naye. Khange ndilale emsebenzini kwaye bendiqhubela phambili ngasemva kweminyango evaliweyo, ndisenza umsebenzi wethu kwaye ngoku lixesha lokubonisa into ebesiyenza kwihlabathi.
"Ndijonge phambili kuyo, yonke into izakuhlangana kwaye ndiza kunikezela ngobusuku bokulwa."
'Bonita' Fernández: “Kuyakuba yinto yokuzonwabisa ukuphumelela abalandeli beCiudad Juárez”
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UDiana Fernández, UFernández ngokuchasene noJurez, ULourdes Juárez	0
UDiana Fernández ngokuchasene noLourdes 'Lulú' Juárez
IJosué Neri Santos Auditorium kaMasipala, eCiudad Juárez, Chihuahua, Mexico - 16/7/21
Inombolo yokuqala ibekwe kwiBhunga lezeManqindi yeHlabathi kwicandelo le-superweightweight, UDiana 'La Bonita' uFernándezIsinyithi esinyithiweyo esiphumelele isihloko se-superweightweight
Ulwa neentshatsheli ILourdes 'Lulú' Juárez Nge-16 kaJulayi kwaye iya kusasazwa kulo lonke elaseLatin America nge 'ESPN Knockout'.
Uqinisekisiwe kwaye womelezwa yimilo yakhe engaqhelekanga kunye nokuba ibhokisi yakhe ivele kangakanani kwimilo yakhe yokugqibela;
UFernández uzinikele ngokupheleleyo kuqeqesho olupheleleyo kuba ebesazi ukuba ithuba lokuncintisana nesihloko liza kuza kungekudala.
Ukulungele ukujongana neentshatsheli zehlabathi kwiJosué Neri Santos Auditorium kaMasipala eCiudad Juárez, eChihuahua, eMexico.
“Ngeli xesha ndifumana ithuba kwicandelo lam, elinobunzima obukhulu, owona mzuzu ubalaseleyo wobomi bam bobuchwephesha kwaye ngaphezu kwako konke ngenkxaso yabantu bam; Ndizakuba yintshatsheli yehlabathi, ”wafunga watsho ..
“Ndinentshatsheli ephambili phambi kwam, imbethi manqindi esele ndiyazi kodwa ikhule kakhulu ukusukela oko sagqibela ukujongana.
“Umlo omkhulu phakathi kwezona zibini zibalaseleyo ehlabathini namhlanje kwaye iyakuba yimbeko yethu yokulwa esixekweni sam nokuphumelela ubuntshatsheli.”
Ikhadi linikezelwa yi-Promociones del Pueblo ngokudibeneyo ne-BXSTRS Promotions.
UMickey Pengue uphakamisa isiciko sokurhoxiswa komlo
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UMickey Pengue	0
UMickey Pengue Uvule izizathu zokurhoxiswa komlo wakhe kwimpelaveki- emva kokuba ugqirha okhalileyo engafuni ukumkhuphisana.
UPengue wayecwangciselwe ukujongana neTysinn Best eQueensland, e-Australia ngoMgqibelo, kodwa emva kokujongana nosulelo lwe-sinus iveki yonke, umlo awukwazanga ukubakho.
I-Australia ngoku ibonakalisile kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, kwaye inethemba lokuba umlo onokubakho kunye neZona ziGqwesileyo unokuphinda umiselwe umhla olandelayo.
UPengue wathi: “Ndidiniwe ukuba nditsho kancinci. Ibali elide elifutshane bendisilwa nosulelo lwe-sinus iveki yonke, xa bendindiza iindlebe zam zivaliwe kwaye ziye zavalwa ukusukela oko kuchaphazele ibhalansi yam, ugqirha okhalayo akazange andivumele ndilwele ukhuseleko lwam.
“Kuqala ndifuna ukuxolisa kuAngelo Di Carlo weAce Boxing kwaye ndifuna ukubulela ububele bakho kule veki iphelileyo. Enkosi ngokundinika ithuba lokuba ndize kulwa.
“Okulandelayo ndifuna ukuxolisa kubo bonke abaxhasi bam; UJohnny Karavasilias, uColin Cuthbert, uBryce Cryer, uChristian Tuckwell, uTom Brydson, noPaul Epsimos. Enkosi ngokundixhasa kunye nokundivumela ukuba ndiqhubeke namaphupha am.
“Uxolo kumchasi wam uTysinn Best, ndiyazi ukuba ngewufakile emsebenzini kwaye ndiyaxolisa ukuba bekufanele ukuba yehle ngolu hlobo, ngethemba lokuba sinokuphinda siyijonge ngelinye ixesha.
“Ndifuna ukubulela ngexesha nangemizamo yazo zonke iinkampu kumqeqeshi wam uTony Del Vecchio kunye neqela lethu kwiBondi Boxing Club. Ndifuna nokuxolisa kusapho nakubahlobo bam kwaye ndibulela wonke umntu othenge lo msinga ukuba angene. Ndiyanithanda nonke kwaye ndiyaxolisa ngokuniphoxa nonke. ”
"Gallo" Estrada vs. "Chocolatito" González 3 kusenokwenzeka ngo-Okthobha 16
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Chocolatito González, UGallo Estrada, IGallo ngokuchasene neChocolatito 3, UJuan Francisco Gallo Estrada, URomán Chocolatito Gonzélez	0
UJuan Francisco Gallo Estrada vs. Román Chocolatito Gonzélez
Ngomhla wamashumi amathathu anesithathu ku-Matshi kwiziko leenqwelo moya laseMelika eDallas, UJuan Francisco Gallo Estrada kwaye URomán Chocolatito Gonzélez yadibana emva kweminyaka emalunga ne-9, ikhokelela kolunye lweemfazwe ezibalaseleyo zika-2021.
U-Estrada woyiswa kancinci kumlo wokuqala wonyaka ka-2012, kwaye kulo nyaka ka-2021 waphumelela ngesigqibo sokwahlukana, ekhusela ngempumelelo isihloko sakhe seWBC super flyweight.
Inkokeli yomdlalo wamanqindi, umkhuthazi u-Eddie Hearn, owayekhona eMexico ukuza kungqina intshatsheli ye-WBC flyweight uJulio César “Rey” Martínez bout, uqinisekisile ukuba uyasebenza ekwenzeni lo mlo uqhubeke.
“Sisebenzela ukubhengeza lo mlo kwaye zincinci kuphela iinkcukacha ezilahlekileyo. "Gallo" Estrada vs "Chocolatito" González I-trilogy ngokuqinisekileyo iya kuba nge-16 ka-Okthobha eLos Angeles.
“Kusenokwenzeka ukuba kwiForam okanye kwiStaples Centre. Sizokwazi ukunikezela ngeenkcukacha kwezi veki zizayo, ”utshilo uHearn.
UDina Thorslund uyasabela emva kokuba yintshatsheli yehlabathi enobunzima obubini
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UDina Thorslund, UJasseth Noriega, Thorslund vs Noriega	0
UDina Thorslund vs. Jasseth Noriega
UDina Thorslund ubulele umkhosi wakhe wabalandeli ngenkxaso yabo engabalekiyo emva kokuba enze imbali ngokuba yintshatsheli enesisindo esiphambili ngeLwesihlanu.
I-Thorslund (16-0, 6 KOs) yoyisiwe UJasseth Noriega Isigqibo ngamxhelo mnye eStru Arena eDenmark ukongeza isihloko se-WBO bantamweight kwisithsaba sakhe se-WBO super-bantamweight.
Ibonile uThorslund wazimisa njengomnye wababhinqileyo ababalaseleyo kwihlabathi, kwaye wayenombulelo omkhulu kuyo yonke iminqweno emihle ayifumeneyo emva komlo.
UThorslund wathi: “Obuphi ubusuku. Iimvakalelo bezilungile kwaye ke nokudinwa emva koko! Kodwa ndingathanda ukubulela wonke umntu ngenkxaso. Ndiyabulela, kwaye ndiyabulela wonke umntu oye wandixhasa ngaphambili kwaye uye wandivuyisana nasemva koko.
“Ndichukumisekile ngokunzulu yiyo yonke loo nto kwaye bekungekho nto iyamangalisa, zombini iintsuku ukuya kumlo kwaye ngoku ziintsuku ezilandelayo. IDenmark emva koko yabetha iWales 4-0 kwi-European Championship, ke iphupha lisaphila nalapho!
“Ndinombulelo ongazenzisiyo, kubagqirha bam, abaqeqeshi, abaxhasi, abahlobo, usapho kunye nawo wonke umntu. Ndiyathemba ukuba wonke umntu uyazi ukuba ndinombulelo kangakanani kwaye wonke umntu unenxalenye yoloyiso lwam ukususela ngoLwesihlanu. Ndinithanda nonke kwaye ndiyathemba ukuba singaphinda siyenze kwakhona kungekudala. ”
'INkanyamba' uHana uqhwithela kwi-pro debut ngalo Lwesihlanu
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	IBaggaley vs Goranova, Borislava Goranova, Isikolo sokulwa, Indawo yokulwa, UHannah Baggaley	0
UHana Baggaley vs Borislava Goranova
UHana Baggaley Pro Ityala 2/7/21
Njengomdlalo wamanqindi wase-Bhritane ubonakalisa iindaba ezibuhlungu zakutshanje zokusweleka kowayesakuba ngumdlali onzima kwitayitile yeblackpool, uBrian London, oneminyaka engama-87- idolophu engaselwandle inokuba nenye inkwenkwezi UHannah Baggaley ukumenza ukuba aqale ukudlala lo Lwesihlanu (Julayi 2), ngokuchasene Borislava Goranova, uhlala kwiFightzone.
'INkanyamba' uHana, oqeqeshwe yi-WBU World Middleweight Champ u-Arnie Farnell, usekwe ekuhlaseleni indawo yomdlalo wamanqindi wase-UK okhulayo kwaye uneenkwenkwezi ezininzi. Ngaphandle kwamava kwikhowudi engahlawulwanga, uHana uyonwaba kukubetha umvuzo kwaye unemincili yokungena eringini okokuqala njengenkqubo eSheffield's Fightzone Arena.
Phambi komlo, sidibene nomlo owaphumelela u-Alfie Warren ukufumanisa ukuba yintoni ebangela ukuba aphawule…
Ungene nini kwaye njani emanqindini?
Ndandineminyaka eyi-14 ubudala, ndinamandla kwaye andizange ndiphume engxakini yokulwa. Utata wandicebisa ukuba ndingene kwezemidlalo kwaye ke saya kumdlalo wamanqindi!
Khawusixelele ngomsebenzi wakho / impumelelo yakho?
Andinayo imvelaphi ye-amateur ngaphandle kwelayisensi kuphela Bendiqala ukuba ngumlo wasekhaya kwaye ndisemfazweni 'ndisendleleni' kwaye bendihamba ndibetha wonke umntu endilwa naye ndisihla nelizwe!
Ngaba uyamthanda umlo osisigxina?
Athini amandla nobuthathaka bakho njengembethi manqindi?
Landela uhambo lwam kwaye uya kufumanisa apha endleleni!
Yintoni eyona nto inzima ngokuba ngumlobi wobuchule (ukuza kuthi ga ngoku)?
Idini lokutya into oyifunayo xa ufuna.
Bobuphi ubunzima ozibona uphumelela amabhanti kubo?
Ngabaphi oomabutho basetyhini baseBritane abakuthandayo kakhulu?
UTerri Harper weBrits. UKatie Taylor wamanye amazwe.
Okona kutya ukuthandayo?
Ukuthatha ipapas ukusuka eBlackpool kwindlela yaseDixon, inkukhu eshushu eshushu kunye neeperi zeperi ze-peri oyakuze ungcamle ngegalikhi iMayo kunye ne-chilli dip.
Ngaba uyayithanda ifilimu?
Ngowuphi umdlali obukhetha ukukudlala kumdlalo bhanyabhanya ngobomi bakho?
UMargot Robbie kuba yenye yeentokazi endizithandayo.
Umsebenzi wakho ngaphandle komdlalo wamanqindi (ukuba unayo)?
Umzobi kunye nomhombisi.
Iinjongo zakho zomdlalo wamanqindi? Yintoni ofuna ukuyiphumeza kulo mdlalo?
Ndifuna ukuphumelela, ukukhusela nokugcina ibhanti laseLonsdale, ukuba yintshatsheli yehlabathi ndize ndigcine ibhanti lam kude kube ngumhlala phantsi. Ndifuna ukukhuthaza isizukulwana esilandelayo samantombazana kumdlalo wamanqindi, kunye nebhokisi eVegas.
Ngubani oyena ukhuthazo lwakho?
Khawusixelele inyani engaqhelekanga ngawe?
Ndaba ngumhlali osisigxina, ndilawula inkampani yokupenda kwaye ndinendawo yokuhlala e-Australia ndaza ndayinika yonke into ukuba ndize ekhaya ndize ndibhokisi.
Yintoni into yokuqala onokuyithenga xa uphumelele iLotto?
Kuxhomekeka malini? Ukuphumelela okuncinci, ndingatyala imali. Ukuphumelela okukhulu, ndiza kutyala imali kodwa ndikhathalele nosapho lwam.
Uzibona ukuphi kwiminyaka emihlanu ezayo?
Landela uHana Instagram kwaye Twitter. Tyelela www.jjaboxing.com
Ngolwazi lwetikiti qhagamshelana 0114 243 4443.
UJoe Joyce ngokuchasene noCarlos Takam ngoJulayi 24 wabhengezwa ngaphantsi
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UCarlos Takam, UCharles Frankham, UChris Bourke, UChris Jenkins, UDavid Adeleye, U-Ekow Essuman, Ezequiel Gurria, UGeorge Fox, UHamza Sheeraz, UJames Beech Jr., UJoe Joyce, Joyce vs Takam, UMicky Burke Omnci	0
UJoe Joyce ngokuchasene noCarlos Takam
I-SSE Arena, iWembley, eLondon-24/7/21
UFrank Warren uhambise ikhadi elimangalisayo lokuxhasa KaJoe Joyce Ukungqubana okukhulu kobunzima obukhulu UCarlos Takam e-SSE Arena, eWembley ngoMgqibelo kaJulayi 24, bahlala kwi-BT.
Ngaphandle kobuntshatsheli be-WBO bamazwe aphesheya kweJoyce, iWBC yesilivere kunye nobuntshatsheli beWweightweight emgceni, umnyuseli weHolo yoDumo wongeze ezinye izihloko zongqubano ezintathu.
Kuya kubakho ingqalelo eninzi UHamza Sheeraz emva kokuba owayesakuba yintshatsheli yobunzima behlabathi ezimbini uCarl Frampton emchaze njengelona themba liphezulu lase-Bhritane kwaye wongeza wathi: "Ukuba akaqhubeki nokuphumelela iwonga lehlabathi, ndiza kuwusebenzisa umnqwazi wam."
USheeraz (12-0, 8 KOs) wenza ukhuseleko lwesithathu kwiWBO yaseYurophu ngokuchasene neSpanish Ezequiel Gurria (15-1, 3 ii-KOs).
U-Sheeraz ka-Ilford, okwiqondo eliphezulu kuluhlu lwe-WBO kwitayitile yeHlabathi ka-Brian Castano, uzakube efuna ibhaso lokuphumelela isixhenxe kulandelelwano lomgama.
Uphumelele isihloko sakhe sokumisa uRyan Kelly ngo-Novemba ngo-2019 kwaye walandelisa ngo-Paul Kean noGuido Nicolas Pitto.
Indawo yase Swansea UChris Jenkins (I-22-3-3, i-8 KOs) iya kuthi ekugqibeleni ikhusele izihloko zayo zase-Bhritane kunye ne-Commonwealth Welterweight ngokuchasene ne-Nottingham's U-Ekow Essuman (14-0, 5 KOs) emva kokufumana kwakhona ukwenzakala.
Bekulindeleke ukuba badibane ngo-Matshi, kodwa uJenkins ongakhange afake amanqindi ukusukela kumzobo wobuchwephesha ngokuchasene noLiam Taylor ngo-Novemba ngo-2019.
U-Essuman wagqibela ukulwa ngoSeptemba 2020 xa wakhupha uCedrick Peynaud ukuba abambe isithsaba se-IBF saseYurophu.
Kumlo wetayitile ehambelana kakuhle, iPeacock gym ace UChris Bourke (9-0, 6 KOs) ukhusela isihloko sakhe se-WBC International Super-Bantamweight ngokuchasene neBloxwich UJames Beech Jr. (12-1, 2 ii-KOs).
I-Bourke yaseStreatham idume njengepuncher eyonakalisayo. Ukuphumelela isihloko sakhe xa ebethelela uMichael Ramabeletsa ngaphakathi kwimijikelo emibini ngoDisemba ophelileyo bubungqina.
I-Beech ayisiyonto yokuqala yokuzikhusela. U-Beech Jnr watyhala u-Brad Foster kuyo yonke indlela kumceli mngeni we-Bhritane kunye ne-Commonwealth kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo ngaphambi kokuphulukana namanqaku.
UWarren uthe: “Iyandivuyisa le khadi iphantsi. Onke amakhwenkwe anethuba lokwenza ingxelo ebonisa ukuba zizenzo eziphambili zekamva.
“UHamzah ngoku uqeqesha eCalifornia kwaye kulento ndiyixelelwayo uchukumisa wonke umntu olapha phandle. Ulele ngokwenyani kwicandelo leSuper-Welterweight, kwaye ndikunye noCarl Frampton ndikholelwa ukuba ufikelela kwelona liphezulu.
“UChris Bourke uyoyikisa nakweyiphi na iSuper-Bantamweights yasekhaya kwaye ndiqinisekile ukuba angathanda ukwenza ngcono kunaleyo yenziwe nguBrad Foster ngokuchasene noJames.
Ndixolile kukuba uChris Jenkins ekugqibeleni uzakufumana olunye ukhuselo emva kokuyeka emsebenzini ixesha elide, kwaye kuyandivuyisa ukukhupha u-Ekow Essuman kwakhona. Nabani na ophumeleleyo kulo mlo, nokuba nguChris okanye u-Ekow, uya kubekwa kwindawo efanelekileyo yokukhaba kwaye aqale ukujonga umlo wenqanaba lehlabathi.
"Ngumlo wama-50-50 kwaye bambalwa abaya kuthi thsuphe benokuqiniseka okukhulu."
Kukwakho nesenzo sobunzima obubonisa UDavid Adeleye (6-0, 5 KOs), ngubani olichasayo yi-TBC.
Kwenye indawo ekhadini, iMill Hill's UGeorge Fox (I-3-0) iya kwenza i-Queensberry yakhe yokuqala, ngelixa iThemba lokuFunda ngeNtsiba elinethemba UCharles Frankham (2-0, 1 KO) yongezwe kwibhili ebekiweyo.
'Intlanga' UMicky Burke Omnci (4-0, 1 KO) naye ubuyile emva kokuphumelela kwakhe kokumisa okokuqala ngo-Novemba kunyaka ophelileyo.
Amatikiti ayafumaneka NGOKU AXS.com. Cofa Apha ukuthenga amatikiti.
Ixabiso le- $ 50
I-70 ngomgangatho / kumgangatho
Umgangatho we- £ 100
Umgangatho we- £ 150
£ 300 VIP Ukwamkelwa iindwendwe
I-DAZN kunye neMatchroom ityhila uluhlu olutsha lwetalente lomoya
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Andy Lee, UChris Lloyd, UDarren Barker, Dazn, UEddie Hearn, UJoseph Markowski, ULaura Woods, umdlalo wamanqindi, UMaya Jama, UMike Costello, UTony Bellew	0
Ukulandela iindaba zamva nje zomdlalo otshintshe iminyaka emihlanu kwilizwe jikelele, i-DAZN, iqonga eliphambili lokusasaza ezemidlalo, kunye neMatchroom, inkuthazo yomdlalo wamanqindi wamazwe aphesheya, bayonwabile ukubhengeza iinkcukacha zoluhlu lwabo olutsha lweetalente ezisemoyeni. abasasazi abagqwesileyo kwezemidlalo.
Eli qela litsha lomoya elinetalente liza kuzisa abalandeli bokulwa yonke inyathelo lesandi, ukukhaba ngenxalenye yesibini yeFight Camp. Ukuthatha indawo kwindawo emangazayo ye-Matchroom HQ eBrentwood, e-Essex kwimpelaveki ezintathu-nge-31 kaJulayi, nge-7 ka-Agasti kunye ne-14 ka-Agasti-lo mnyhadala wemilo uqala ishedyuli engenakulinganiswa nabalandeli bamanqindi kunye nokuqinisa i-DAZN njengekhaya lembethi manqindi.
Kwidibano enkulu ye-DAZN kunye neMatchroom, ibali losasazo laseBritane UMike Costello uzakuthatha izintso njengomsasazi okhokelayo, eshiya indima yakhe njengentatheli ye-BBC ye-Boxing kunye ne-Athletics emva kweminyaka eli-15. Emva kokugubungela ii-Olimpiki ezisixhenxe kunye nemidlalo engenakubalwa yeSihloko seHlabathi ngexesha lomsebenzi wakhe obengezelayo kwi-BBC, uCostello uzimisile njengomnye wabachazi abaziwayo kwezemidlalo namhlanje.
Eyona nto ithethwa kakhulu e-UK malunga nomsasazi weTV kunye nomsakazo UMaya Jama izisa umbono omtsha kwiqela. UMaya unobuntu obunempembelelo kwaye ubonise iindidi zemiboniso bhanyabhanya yeChannel 4, ITV kunye ne-BBC kwiTV nakunomathotholo. Kutshanje, uye wabonisa umboniso we-BBC Gcina iHlabathi lasehlotyeni kunye neeYuro eziGqithileyo zonyaka kunye nomdlali wangaphambili waseNgilandi uPeter Crouch. Uye wabamba amanqaku amabhaso amaninzi anjengee-MOBOs, i-BRITS kunye ne-2020 BAFTA ikhaphethi ebomvu.
Owayesakuba yintshatsheli yeWBC Cruiserweight yeHlabathi UTony Bellew lelinye lawona manani aziwayo kumlo wamanqindi emva kokuthatha umhlala-phantsi kwezemidlalo ngo-2018. Owayesakuba yinkwenkwezi ye-PPV wakhanyisa amabala emidlalo nakwii-arena kwihlabathi liphela ngexesha lokuzikhumbuza kwaye sele esenza umsebenzi wobuntatheli. ubuntu kunye nepundit ekhokelayo kwezemidlalo.
ULaura Woods uzimanya neqela njengoMsasazi woNyaka weMidlalo weSJA wama-2021 nomnye wabasasazi abakhokelayo kushishino lwezemidlalo. Usasaza rhoqo ngeveki kunomathotholo nakumabonwakude, ebamba intetho yesidlo sakusasa i-talkSPORT, enye yezona ndawo zimanyelwa kakhulu kwimidlalo yasesidlo sakusasa kweli lizwe.
Owayesakuba yintshatsheli yeWBO Middleweight World Andy Lee Uhlala engoyena mntu ubalaseleyo kumdlalo wamanqindi kwaye ubambe ukuqonda okuqaqambileyo ekuqeqesheni ngenxa yokuzibandakanya kwakhe noTyson Fury noJoseph Parker. Ibali lomlo laseIreland linenye yezona ngqondo zibukhali kwezemidlalo kwaye uye wazimisela ngokukhawuleza ukuba ungoyena mntu uthandwayo emva kokushicilela kwiRadio Radio 5 Live kunye nezinye ezininzi.
Owayesakuba yintshatsheli ye-IBF Middleweight yeHlabathi UDarren Barker kunye nomhlalutyi weengcali UChris Lloyd Bakhe ubudlelwane obugqwesileyo ukusukela oko baqala ukusebenza kunye kwiVeki yokulwa yomdlalo weveki ukwakha imiboniso kwakhona ngoSeptemba 2018. Abalandeli bokulwa baya kuvuyiswa kukuba i-duo enamandla iya kuqhubeka nokuzisa yonke iveki yomlo omkhulu eyakhayo kunye nokunye okuninzi.
Iqela le-DAZN i-EVP UJoseph Markowski Ugqabaze wathi: “Olu luhlu lubalaseleyo lwabasasazi lubethelela ukuzibophelela kwethu ekuziseni ixesha elitsha lomdlalo wamanqindi wehlabathi, sinika abalandeli elona lungelo lihle, njengoko siqala umlo kunye neenkqubo ezibanzi kwizinga elingazange labonwa ngaphambili. Umbonisi ngamnye uza kuzisa imbono yakhe eyahlukileyo kunye nesimbo kwindlela yethu yokugubungela, njengoko sithatha indlela entsha kulo mdlalo ukhula ngokukhawuleza, kwaye siza kudibanisa abalandeli abakhoyo nabatsha ngokufanayo.
Usihlalo womdlalo wamanqindi UEddie Hearn uthe: “Andinakuba neqhayiya ngeli qela leetalente esilidibanisele iprojekthi yethu entsha. Ukuphehlelelwa kweMatchroom Media kusenze sakwazi ukwenza indawo yokufihla ingqondo kuyo yonke into kwasekuqaleni ukugqitywa kwemiboniso yethu ukuze sikwazi ukuhambisa amava omnyhadala ophilayo kumbukeli kwingxelo nakwindlela esakhe ngayo.
Ngumxube wokwenene wamabali oshishino kunye neetalente ezintsha eziya kuthi zisinike ukuthembeka kunye namandla okuqhubela phambili eli xesha litsha. UMike Costello kudala eyintandokazi yabaphengululi bamanqindi, kwaye sonwabile ukuba simamkele kwiqela. UMaya Jama ngoku ungomnye wabasasazi abakhokelayo kunye nobuntu kumabonwakude waseBritane, kwaye uzisa umbono omtsha kubaphulaphuli kubaphulaphuli, njengomlandeli wamanqindi kunye nomsasazi wezemidlalo owaziwayo. Asinakulinda ukuba siqale ngeNkampu yokuLwa kwinyanga ezayo! ”
UMike Costello uthe: “Ndinexesha elimnandi kakhulu kwi-BBC ixesha elide kangangokuba bendisoloko ndisithi kungathatha into ekhethekileyo ukundicenga ukuba ndiyishiye le ndima kwaye ndicinga ukuba yinto ekhethekileyo.
“Ndiyawathanda amandla, amabhongo kunye nomdla wokujikeleza eli phulo litsha ne-DAZN kunye neMatchroom. Ukusuka kumabonwakude omnyama nomhlophe, iBoks ibingomnye wemidlalo ethandwa kakhulu apho imidlalo yeTV ibikhula. Emva koko safudukela kwi-PPV nakwisathelayithi. Kule minyaka ingamashumi amanqindi amanqindi ethambekele ekuhambeni namaxesha kubume beendaba kwaye ndicinga ukuba eli linyathelo elilandelayo lolo hambo.
“Owona mceli mngeni ucacileyo kukuba kunomathotholo umsebenzi ukupeyinta imifanekiso, kumabonakude umsebenzi kukongeza kwizinto esele zibonwa ngababukeli. Yindlela eyahlukileyo yokuchaza kodwa kuya kufuneka ndizise onke amava am kwiradi yomabonakude ukuya kumabonwakude. Oku kum lelinye lomtsalane wendima entsha ukuthatha umceli mngeni omtsha kweli nqanaba lomsebenzi wam.
"Eli lithuba elihle lokuba iimfazwe ezinkulu zenzeke rhoqo kwaye ndijonge phambili ekubeni lilizwi elirhangqayo ubusuku obuninzi obuzayo."
UMaya Jama uthe: “Kuyandivuyisa ukujoyina i-DAZN kunye neMatchroom. Ndihlala ndiwuthanda umdlalo wamanqindi kwaye yinto entsha kum yonke into endingenakulinda ukuba iqale. Ndiyathemba ukuzisa amandla amatsha, incasa kunye nevibe komnye wemidlalo endiyithandayo kwaye andinakukuvuyela ukusebenza neqela elimnandi nelikumgangatho wehlabathi. ”
Ukuze ubhalise, khuphela i-app ye-DAZN kuso nasiphi na isixhobo esiqhagamshelwe kwi-intanethi, kubandakanya negumbi lokuhlala elinje ngeTV ezikrelekrele, iintonga zokusasaza kunye nemidlalo yomdlalo kunye nee-smartphones, iitafile, iilaptops kunye neePC. Isibonelelo esikhethekileyo sokungeniswa kwe- $ 1.99 / € 1.99 ngenyanga ngenyanga iyafumaneka ngoku kubalandeli base-UK naseIreland- ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela i-www.DAZN.com
UDennis McCann: Ndiza kunkqonkqoza okukhulu!
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDennis McCann, UJohn Chuwa, UMcCann vs Chuwa	0
UDennis McCann noJohn Chuwa
IRoyal Albert Hall, eLondon, eNgilani-10/7/21
UDennis McCann Ufunge ukuba uza kubuyela kweyona nto imbi kuye xa ejongene nayo UJohn Chuwa kwiRoyal Albert Hall kwinyanga ezayo.
UMcCann ongoyiswanga (9-0, 5 KOs) ujongane noChuwa (20-4, 10 KOs) kumdlalo weQueensberry Promotions eLondon ngoJulayi 10, phila kwi-BT Sport.
UMcCann uhambe umjikelo osibhozo kumjikelo wakhe wokugqibela, kodwa uziva ukuba loo midlalo ibingeyonyani kwinto akwaziyo ukuyenza, kwaye uthembisa umboniso otshabalalisayo nxamnye noCwawa.
UMcCann uthe: “Ndizigilele kancinci, ukunyaniseka kuwe. Leyo yingxaki kum, ndizilolonga kakhulu, kodwa ndikulungele ukulwa ngoku kwaye andinakulinda ndingene eringini.
Mamela, konke malunga nokuphumelela, okona kubaluleke kakhulu kuba awunakusoloko usonwabisa abantu. (UMoreno) wayeyimbethi encinci kwaye awuyibethi ngenqindi. Ndaziva ngathi ndingamkhupha apho, kodwa ndimamele imiyalelo kwikona kwaye uAl (Smith) wayezama ukundibamba kancinci.
“Wayengandiyeki! Bendilwela ukuyalela kwaye kufuneka ndimamele umqeqeshi wam kuba undifikisile kule ndawo ndikuyo namhlanje.
“Hayi khange ihambe kwaye kufuneka uziqhelanise nomchasi wakho. Uya kuba sisidenge ukubetha ngenqindi - ngubani owenza loo nto? -Kwaye awufuni kubanjwa kuba ithatha nje ibenye kwaye inokuba ngumdlalo ngaphezulu. Ungabakhupha abantwana abangengabo abahlaseli, kodwa xa usilwa nesinqindi awufuni kujika naye.
“Ndiye ndawenza ke umsebenzi ndisazi ukuba ngekhe ndamnqanda, kodwa uAl akandivumanga. Kule mpi ilandelayo, ndithembe, ndiyeza kunkqonkqoza enkulu.
“Izinto ezimnandi azikahambi, uyandazi, uDennis uMoyikisi kwaye ndiza kwiknockout enkulu kwixesha elizayo. Ndifumene imijikelezo nangona ndaye ndamxhasa ngeenxa zonke, ndimwisa kube kanye, ke ngekhe ufune okuninzi.
“Ufumana abantu bakubiza apha naphaya, yiyo loo nto ayenzi mahluko kum. Bafuna igama lam, onke la mathemba afuna igama lam, yinto eqhelekileyo. Mhlawumbi bajonge imithombo yam yemithombo yeendaba kunye nayo yonke enye into, ndibone ndifumana ukukhanya, ke bonke bafuna isiqwenga kum.
“Kodwa ngaba bafuna iqhekeza lam? Bonke baya kundibiza ngegama kodwa abayi kulwa nam. Ukuba bangobunzima bam bangabufumana, kodwa ungathethi nje ukuba uza kubunzima bam.
“Ndingatsho ukuba ndiyehla kubunzima obukhulayo, kodwa andizukuza kubunzima obuthile, andithi? Ke ukuba banesisindo sam nasendleleni yam ndiyakonwabela ukubethelela enye yazo. ”